DEGDEG: 96 Xildhibaan oo dalbaday in dib loo furo Golaha Baarlamaanka iyo Xildhibaanadii Mucaaradka oo la soo baxay dardar horleh iyo Farmaajo oo Mooshin dulsaaranyahey. – Kismaayo24 News Agency
DEGDEG: 96 Xildhibaan oo dalbaday in dib loo furo Golaha Baarlamaanka iyo Xildhibaanadii Mucaaradka oo la soo baxay dardar horleh iyo Farmaajo oo Mooshin dulsaaranyahey.
Maqaalo iyo Warar Somali News Top News Xulashada K24
by gurey 22nd December 2017 058
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mida xildhibannada mucaaradka u ah hoggaamka dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay dalbadeen dib u furista Baarlamaanka si mooshin loogu qaado Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Wuxuu sheegay inay waaan mooshinkii xilka qaadista Madaxweyne Farmaajo, ayna heystaan Xildhibaano ku filan mooshinka ka dhanka ah Madaxweynaha, isagoo sii raaciyay in 96 Xildhibaan oo ka mid ah Golaha shacabka Soomaaliya ay dalbadeen in dib loo furo golaha si mooshinka loo keeno.
3- Burburinta dowlad goboleedyada iyo eedeymo kale
C/raxmaan C/Shakuur ayaa xalay laga siidaayay Xabsiga iyada oo maanta la filayo in Maxkamadda gobolka Banaadir uu mar kale ka soo hormuuqdo.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa wareysi uu siiyay Wakaaladda Wararka ee Reuters ku sheegay in ay filayaan in kalfahdiga Baarlamaanka uu dib u furmo mooshinka xilka qaadista Madaxweynahanaha ay fuliyaan.
DegDeg: Gudoomiye Jawaari oo Warqado Jawaab Celin ah u diray Xeer ilaaliyaha Guud Ee Qaranka
Xildhibaan Axmed Macalim Fiqi oo daaha ka qaaday Xaafiisyo Cusub oo Qarsoodi ah uga furan Magaalada.
Breaking News :- Axmed Madoobe oo ka dagay Magaalada Nairobi asago ku soo fashilmay…
DAAWO: Dhagax Dhiga Safaarada Soomaaliya ee dalka Kenya & R/Wasaaraha oo kahadlay
Qarax xoogan oo ka dhacay Ceelasha Biyaha iyo ma’uul lagu dhaawacay.